အညွှန်းကိန်း - Rikoooo
ဘာသာစကားများ ဘာသာစကားများကို Select လုပ်ပါအဂၤလိပ္အဘိဓါန် Afrikaansအဘိဓါန် Albanianအဘိဓါန် Arabicအဘိဓါန် ArmenianAzerbaijani အဘိဓါန်အဘိဓါန် Basqueဘီလာရုဘူဂေးရီးယားကာတာလတရုတ် (မျက်မှောက်ရေးရာ)တရုတ် (ရိုးရာ)-CroatianခကျြခကျြဒိနျးမတျဒတျချြEstonian အဘိဓါန်အဘိဓါန် Filipinoဖင်လန်ပြင်သစ်အဘိဓါန် Galicianဂျြောဂြီယနျဂျာမန်ဂရိအဘိဓါန် Haitian Creole အဘိဓါန်ဟီဘရူးဟိန်ဟန္ေဂရီလန်အင်ဒိုနီးရှားအိုငျးရစျအီတလီဂျပန်ကိုရီးယားအံအာနီယံ-Macedonianမလေးမောလ်နျောရှအရောင်တင်ပေါ်တူဂီအဘိဓါန် Romanianရုရွားဆားဗီးစလိုဗကျစလိုဗေးနီးစပိန္ဆွာဟီလီဆွီဒင်ထိုင်းတူရကီယူကရိန်းဒူဗီယက်နမ်ဝလေဝလေအဘိဓါန် Yiddish
လိုက်ဖက်တဲ့ Prepar3D v4
အသုံးပြုသူအမည်: စကားဝှက်: ငါ့ကိုသတိရပါ
သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမေ့နေပါသလား? သင့်ရဲ့အသုံးပြုသူအမည်မေ့နေပါသလား? အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးသည်
ပျံသန်းမှုရေး Simulator ဖိုရမ်
Flight Simulator ကို X (FSX) နှင့်ရေနွေးငွေ့
အဆိုပါအဲယားဘတ်စ် A3 Multi-Livery အထုပ်ကို install ပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမ 330D ယာဉ်
အဆိုပါအဲယားဘတ်စ် A3 Multi-Livery အထုပ်ကို install ပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမ 330D ယာဉ်3နှစ်ပေါင်း2ရက်သတ္တပတ်အကြာ #703
ကျွန်မပထမဦးဆုံးအဲယားဘတ်စ် A330 Multi-Livery အထုပ်ကို install, ထို့နောက်ငါအဲယားဘတ်စ် A340, Mega အထုပ် Vol 1 install လုပ်ပါ။ ထိုနောက်မှငါသည်အဲယားဘတ်စ် A340, Mega အထုပ် Vol2install လုပ်ပါ။ ရုတ်တရက် A330 နှင့် A340 (Vol ။ 1) တော့ဘူးသူတို့ရဲ့ 3D cockpit ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး! ဒီလိုပြန်လည်နှင့်ကဲ့သို့သောအရာအားလုံးကိုကြိုးစားခဲ့နဲ့ကျွန်မကိုလည်း gauge tool ကိုအသုံးပြုခဲ့ပေမယ့်နည်းနည်းအကူအညီကိုပြု၏။ မဆိုအကူအညီကိုအလွန်တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။
ကျေးဇူးပြု လော့ဂ်အင် or အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးသည် စကားဝိုင်းမှာ join ဖို့။
အဆိုပါအဲယားဘတ်စ် A3 Multi-Livery အထုပ်ကို install ပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမ 330D ယာဉ် လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ပေါင်း 1 အပတ်က #711
အဆိုပါအဲယားဘတ်စ် A3 Multi-Livery အထုပ်ကို install ပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမ 330D ယာဉ်3နှစ်ပေါင်း5days ago #712
အထုပ်ထဲမှာတချို့ကလေယာဉ်ဟာ POSKY ထံမှဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့တစ်တွေ VC ကိုမရှိကြပါဘူး။ အဆိုပါသောမတ်စ်ရုသသည်ကနေသူမြားကိုကရှိသည်။
အဆိုပါအဲယားဘတ်စ် A3 Multi-Livery အထုပ်ကို install ပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမ 330D ယာဉ်3နှစ်ပေါင်း4days ago #717
Dariussssss wrote: မင်္ဂလာပါသင်နှင့်ကြိုဆိုနှစ်ခုစလုံးရန်။
ယင်းဖြေကြားချက်ကိုမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, အ POSKY သူတွေကို VC ကိုရှိဒါကြောင့်ဖြစ်စေမည်သို့ပင်ဖြစ်စေရှိသလော
ဘုတ်အဖွဲ့အုပ်စုများ Rikoooo အကြောင်း - ကွိုဆိုနယူးအဖွဲ့ဝင်များ - အကြံပြုချက် Box ကို - ကြေညာချက် ပျံသန်းမှုရေး Simulator ဖိုရမ် - Flight Simulator 2020 (FS2020) - Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှ Prepar3D (P3D) - Flight Simulator X (FSX) နှင့်ရေနွေးငွေ့ - FS 2004 - ရာစုနှစ်များစွာပျံသန်းမှု - X-Plane မီဒီယာ - Screenshots - ဗီဒီယိုများ လေယာဉ်ရုံ Talk ကို - အထွေထွေဆွေးနွေးမှု - Fly Tune - အဘယ်အရာကိုအဘယ်မှာဒီနေ့သင်ပျံသန်းခဲ့ဘူး - ရီးရဲလ်လေကြောင်း အခြားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ရေး Simulator - လေယာဉ်ဂီယာပျံသန်း Simulator ကို - - FlightGear အကြောင်း - DCS ဆောင်းပါးတွဲ - benchmark Sims
0.180 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်
စွမ်းအားဖြင့် Kunena ဖိုရမ်
Facebook ပေါ်မှာ rikoooo မှသတင်းများ
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို Enable နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုဆက်ထိန်း
2005 - 2020 Rikoooo.com All rights reserved | CNIL 1528113
သငျသညျယခုသင့်ရဲ့ Facebook အထောက်အထားများကို အသုံးပြု. logged in ဝင်သောလျက်ရှိသည်